Ogaden News Agency (ONA) – Weerarkii Nairobi & Sida uu Soomaaliya Kenya U Saameeyay.
Weerarkii Nairobi & Sida uu Soomaaliya Kenya U Saameeyay.
Markii ay soo shaac baxday in dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen dhismaha Dusit D2 ee xaafada Westland ee Nairobi, ayaa Soomaali badan oo ku nool caasimadda waxaa la soo gudboonaaday walaac xooggan.
Dadka ayaa ka cabsi qabay in maadaama mas’uuliyadda weerarkan uu sheegtay ururka Al-Shabab ee saldhigiisu yahay Soomaaliya, ay taasi keeni karto in ciidammada ammaanka ay bartilmaameedsadaan xaafada Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay. Sidoo kale waxaa jirtay cabsi ah in shacabka kale ee Kenyan-ka ah ay beegsadaan Soomaalida.
Durbadiiba waxaa baraha bulshada ka bilowday olole ay Soomaalida ku nool Kenya ku muujinayaan in aanay wax xidhiidh ah la lahayn weerarka, iyadoo si weyn loo adeegsanayo halku dhig ah “argagixisadu Diin ma laha.” Cabsida ugu badan ayaa ka taagneyd raacidda gaadiidka dadweynaha, waxaana dad badan ay ku qasbanaadeen inay kiraystaan tagaasi.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafada Islii ayaa shaaciyay in shalay ay xidhi doonaan meheradahooda si ay taageero ugu muujiyaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkii Dusit D2. Ilaa iyo hadda lama sheegin qof Soomaali ah oo Nairobi loogu beegsaday weerarkaasi awgii.
Markii ay cadaatay in qaar ka mid ah raggii weerarka fuliyay aanay Soomaali ahayn, ayaa sida muuqata waxaa yaraaday cadaadiskii baraha bulshada ka saarnaa Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaan kuwa Nairobi.